धनगढीमा जातीय मत हाबी- स्थानीय निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
धनगढीमा जातीय मत हाबी
थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले थारू र पहाडी समुदायका बीच कोरेको विभाजनको छाया चुनावमा
असार ९, २०७४ डीआर पन्त
धनगढी — प्रमुख दलहरूले प्रदेश नम्बर ७ को राजनीतिक तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको धनगढी उपमहानगरको चुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । विगतका चुनावमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको भए पनि अहिले यी दुई दलसँगै माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र उम्मेदवारका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो मतअन्तरले निर्वाचन जितेको यो उपमहानगर र सँगै जोडिएका अन्य ठाउँमा क्षेत्रीय र जातीय मतले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट महानगरमा ४४ प्रतिशत मतदाता रहेको राना थारू समुदायबाट उम्मेदवार दिइनु, व्यवसायी गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु, कांग्रेस र एमालेमा थारू समुदायबाट प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी नदिनु जस्ता विविध कारणले परिणाम सोचेभन्दा फरक आउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
‘अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलनको प्रभाव पनि यो निर्वाचनमा पर्न सक्छ,’ प्राध्यापक डा. टीएन जोशी भन्छन्, ‘जातीय रूपमा मतदान भयो भने परिणाम सबैले सोचेभन्दा फरक पनि हुन सक्छ । अहिलेसम्मका निर्वाचनको ट्रेन्ड भने त्यस्तो देखिएको छैन ।’ भेगीय प्रभावले पनि निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने उनले बताए । ७ वटा पहाडी जिल्ला, कर्णालीपारि र पूर्वी नेपालबाट बसाइँ सरी आएका अधिकांश बासिन्दा मतदाता भएकाले यसको असर हरेक निर्वाचनमा झैं यस पटक पनि पर्न सक्छ । जोशीका अनुसार थारू मतदाताको रुझान कता हुन्छ ? त्यसले हारजित प्रभावित हुने निश्चित जस्तै हो । उपमहानगरमा ४४ प्रतिशत थारू, १७ प्रतिशत क्षत्री, १३ प्रतिशत ब्राह्मण, साढे ७ प्रतिशत दलित, ३ प्रतिशत ठकुरी र साढे १३ प्रतिशत अन्य मतदाता रहेका छन् ।
०४९ को पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमतका साथ निर्वाचन जितेको धनगढीमा ०५४ मा एमालेले कब्जा गरेको थियो । ०५१ को मध्यावधिमा नगर क्षेत्रका निर्णायक मतका कारण एमाले नेता महेश्वर पाठकले निर्वाचन जिते । ०५६ मा कांग्रेसले विजय हात पार्‍यो । ०६४ को संविधानसभामा भने माओवादीकी लीला भण्डारीले नगर क्षेत्रमा राम्रो मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरिन् ।
दोस्रो संविधानसभामा फेरि मतदाता परिवर्तन भए । कांग्रेसले झन्डै दोब्बर मत अन्तरले विजय आत्मसात् गरेको थियो । ‘हरेक निर्वाचनमा परिवर्तन हुने मतदाताको मनोविज्ञानले यसपटक पनि सोचेभन्दा फरक परिणाम आउन सक्छ,’ नागरिक अगुवा रविन पन्तले भने, ‘मतदाता परिवर्तन चाहन्छन् । त्यो परिवर्तन कसको पक्षमा हुन सक्छ, केही दिन अझै पर्खिनुपर्छ ।’ थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले थारू र पहाडी समुदायका बीचमा कोरेको विभाजनको छाया चुनावमा देखिने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनले बताए । कांग्रेस र एमालेभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विभाजनले पनि निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छ । दुवै दलका असन्तुष्ट नेता प्रचारमा देखिए पनि अन्तरघातको सम्भावना पनि जीवन्त रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनौती
धनगढी उपमहानगरमा विकासका एजेन्डासहित गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । जातीय र भेगीय रूपमा मतदाता बाँडिएका प्रदेश नं ७ को एक मात्र उपमहानगरमा उनको उम्मेदवारी प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका लागि बढी चुनौती बनेको छ । हमालले विकासका स्पष्ट एजेन्डासहित मतदाता आर्कषित गर्न थालेका छन् ।
टोलटोलमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत माग्न कार्यालय स्थापना भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका समर्थक नै उनको प्रचारमा लागेकाले पनि अन्य दलका उम्मेदवार झस्किएका हुन् । हमालले धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे गर्न, ब्लड बैंकको स्थापना, मेडिकल कलेज स्थापनाको पहल र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
अन्य दलका उम्मेदवारको पनि आआफ्नै दाबी छ । ‘सबै राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । विकास युगको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्ने भएकाले जित्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन,’ कांग्रेस उम्मेदवार नृप वडले भने । शान्ति र विकासका लागि कांग्रेस आवश्यक छ भन्ने कुरा जनताले बुझेको उनले बताए ।
एमाले उम्मेदवार दुर्गा जोशीले पनि आफ्नो दलले जनताका हरेक विकासका इच्छालाई सम्बोधन गर्दै आएको दाबी गरे । उनले भने, ‘समाजको तल्लो वर्ग, गरिब, निमुखा जनताका लागि एमालेले आफ्नो शासनकालमा सुरु गरेका काम जनताले बिर्सेका छैनन् ।’ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रामसमझ रानाले अहिलेको परिवर्तन माओवादीका कारण सम्भव भएको बताए ।
प्रकाशित : असार ९, २०७४ ०८:३१
चुनावी दौडाहामा दाहाल
असार ९, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
बाँके — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पश्चिम तराईका जिल्लामा चुनावी दौडाहामा छन् । पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन उनलाई चुनावी सभामा सहभागी हुन भ्याइनभ्याई छ । उनी बिहीबार बाँकेका चार चुनावी सभामा सहभागी भए ।
सडक कालोपत्रे, ग्रामीण क्षेत्रमा छोटी भन्सार स्थापना, लोडसेडिङ हटाउने, नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनेदेखि अभिभावक बन्ने सपना बाँडे । खजुरा गाउँपालिका सीतापुरको चुनावी सभामा उनले सडक कालोपत्रे र सीमामा छोटी भन्सार राख्ने बताए । ‘हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुभयो भने खजुरा गाउँपालिकाका सडक कालोपत्रे हुन्छन् ।
सीतापुरपछि नेपालगन्जको त्रिचुवन चोकमा सहभागी भएका अध्यक्ष दाहालले विकासका क्रममा पछाडि परेको नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने उद्घोष गरे । तर, त्यसका लागि आफ्ना पार्टीका मेयर पदका उम्मेदवारलाई जिताउने सर्त राखे । मुस्लिम र मधेसी मतदाता बाहुल्य रहेको नेपालगन्जको राजनीतिक तरल अवस्था बुझेका उनले अभिभावक बन्न तयार रहेको प्रतिबद्वता जनाए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला स्वर्गीय भएपछि केन्द्रसँग जोड्ने नेताको अभाव रहेको प्रसंग सुनाए । ‘अहिले नेपालगन्जवासीलाई लागेको होला केन्द्रसम्म नेपालगन्जको पहुँच टुटेको छ । तर त्यसो होइन, मैले तपाईंहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छु’, उनले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘नेपालगन्जलाई महानगर बनाउँछु । शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक र पर्यटनको हब बनाउने प्रयास मेरो रहन्छ । तर, मेयरमा जिताउनुस् ।’
यहाँ रहेको हवाई अड्डाको स्तरोन्नति गरी नेपालगन्जबाट सीधै दिल्ली, देहरादुनसम्म उडान गराउने प्रयासमा लाग्ने उनले बताए । ‘यसले भारतबाट नेपालगन्जमा पर्यटक आउने क्रम बढ्नेछ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आर्थिक विकासका लागि यहाँ उद्योगहरू स्थापना गरिने छ ।’
त्यसलगत्तै उनले कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे । अध्यक्ष दाहाल बिहीबार साँझ बर्दियाको चुनावी सभामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । बर्दियापछि उनले ७ नम्बर प्रदेशका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
‘स्थानीय तह जनसरकारकोवैधानिक रूप’
गुलरिया– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह जनयुद्ध कालमा चलाएको जनसरकार र जनसत्ताको वैधानिक रूप भएको बताएका छन् । दाहालले बिहीबार बर्दियाको मनिकापुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटकआफूहरूले संविधानबमोजिम जनसरकारको चुनाव गर्न लागेको बताएका हुन् ।
प्रकाशित : असार ९, २०७४ ०८:३०